တွေ့ကရာ App တွေကို ဘာကြောင့်မသုံးသင့်တာလဲ...? | Online Service Center Myanmar -->
တွေ့ကရာ App တွေကို ဘာကြောင့်မသုံးသင့်တာလဲ...?
လူသုံးများတဲ့ App တွေ၊ အသစ်အဆန်းလေးအနေနဲ့ပေါ်လာတဲ့ App တွေကို လက်လွတ်စပါယ်အသုံးမပြုသင့်ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ အခု ဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာပြောပြထားသလိုပါပဲ App တွေတိုင်းက User info တွေကို တောင်းခံတယ်၊ စုဆောင်းတယ်၊ ပြန်လည်အသုံးချတယ်၊ App ကိုဖုန်းထဲထည့်ပြီး Install စသွင်းလိုက်တာနဲ့အသုံးပြုမည့်သူဆီကပါမစ်တောင်းတာရှိသလို၊ ပါမစ်မတောင်းပဲသူ့ဘာသာလုပ်ချင်ရာဝင်လုပ်သွားတာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်။
App တစ်ခုကို Install သွင်းတိုင်း လူအယောက် 100 မှာ 99 ယောက်လောက်က ဒီ App က ဘာတွေပါမစ်တောင်းထားလည်းဆိုတာ စစ်ဆေးခြင်းမျိုး လုံးဝမှမရှိပဲ ကိုယ့်ဖုန်းထဲဝင်သွားပီးရောဆိုပြီး ဖြစ်သလိုပဲ Install လုပ်ပစ်လိုက်ကြတာများပါတယ်။ အဲ့လိုဆိုရင် ဘာတွေဖြစ်နိုင်လည်းဆိုတော့ ကိုယ်မသိပဲ နောက်ကွယ်ကနေ ကိုယ့်အချက်အလက်တွေကိုခိုးယူနေတာမျိုးတွေ၊ ပြန်လည်အသုံးချနေတာမျိုးတွေ၊ ပြုလုပ်နေနိုင်ပါတယ်။ Phishing app မျိုးတွေဆိုရင်တော့ App ကိုစသုံးလိုက်ကတည်းက ကိုယ့် User name and Password ကို တစ်ဖက်ကို ပို့ပြီးသားဖြစ်သွားပါပြီ။
ပိုက်ဆံပေးရတဲ့ App နဲ့Free ပေးတဲ့ App ဘယ်ဟာက Safe ဖြစ်လဲ...?
ငါသုံးတဲ့ App က ဝယ်သုံးထားတာကွ၊ ဘယ်လောက်တောင်ပေးထားရတယ်၊ မင်းတို့က Free ရတဲ့ App တွေကိုသုံးတာဖြစ်မှာပေါ့ဆိုပြီး ဝယ်သုံးတာနဲ့ဝယ်မသုံးတာနဲ ့အပေါ်မှာခွဲခြားမှုလုပ်နေလို့မရပါဘူး။ မည့်သည့် App မဆို User info တွေကို တောင်းခံတယ်၊ စုဆောင်းတယ်၊ ပြန်လည်အသုံးချတာမျိုးတွေ လုပ်ကြတာချည်းပါပဲ၊ နည်းနည်းစီပဲကွာပါမယ်။
ကွာခြားမှုက ဘာကွာနိုင်လဲဆိုတော့ ဝယ်သုံးထားတဲ့ App ထဲမှာ Ads(ကြော်ငြာ)ပါဝင်မှုနည်းပြီး မပါတာများပါတယ်။ Free ပေးထားတဲ့ App တွေမှာတော့ Ads(ကြော်ငြာ)တွေထည့်သွင်းထားတာများပါတယ်။ Free ပေးထားတဲ့ App 100 မှာ 99 လောက်က ကြော်ငြာတွေထည့်သွင်းကြပါတယ်။
iOS နဲ့ Android ကွာခြားရင်ရော Safe ဖြစ်နိုင်လား...?
ငါက iOS သုံးတာကွ မင်းတို့လို Android သုံးတာမဟုတ်ဘူး၊ အဲ့ဒါကြောင့် အဲ့လိုတွေတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီး ကြွေးကြော်နေလို့မရပါဘူး။ လူသုံးများတဲ့ App တွေကို iOS အတွက်ရော Android အတွက်ပါရေးသားပေးထားကြတာများပါတယ်။ ဘယ် OS ပဲသုံးသုံး ဂျင်းထည့်တာတွေနဲ ့ကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်။
iOS app store developer account ဆိုရင် $99 ကနေ $299 ရှိပါတယ်။
Android app developer တွေအတွက် Play store account က $25 ပဲရှိပါတယ်။
ဒီတော့ အဲ့ဒီငွေလောက်ရင်းပြီး အဲ့ဒီထက်ပိုရနိုင်တာကိုသိထားတဲ့ App developer တွေ Hacker တွေ Attacker တွေအနေနဲ့ကတော့ အဲ့လောက်ကိုရင်းပြီး သူတို့လိုချင်တာရဖို့လုပ်နေဆဲ၊ လုပ်နေမြဲပါပဲ၊ User data တွေကို စုဆောင်းချင်လို့( လိုချင်လို့)ရေးထားတဲ့ App တွေ၊ Ads(ကြော်ငြာ)တွေထည့်ပြီး ငွေရှာဖို့အတွက်ရေးထားတဲ့ App တွေဆိုတာ အများကြီးမှ အများကြီးပါပဲ။
ဒါဆို Safe ဖြစ်အောင်ဘာတွေဆောင်ရ၊ ရှောင်ရမလဲ...?
ဘယ် OS( iOS or Android ) ကိုပဲသုံးသုံး App တွေဆိုတာကတော့ မသုံးမဖြစ်သုံးနေရတာတွေရှိသလို၊ အမှန်တကယ်လိုအပ်လို့သုံးနေရတဲ့ App တွေလည်းရှိပါတယ်။ ဒီတော့ Safe ဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုရင် ကိုယ်သုံးတဲ့ App တွေဟာ Official app ဟုတ်ရဲ့လားဆိုတာမျိုးတွေကိုလည်းစစ်ဆေးကြည့်ဖို့လိုပါတယ်။
နမူနာအနေနဲ့လူသုံးများတဲ့ App တွေဆိုရင် Facebook, Messenger, Viber, Camera360, VivaVideo, လိုမျိုးတွေသုံးတယ်ဆိုပါစို့ ကိုယ့်ဖုန်းထဲမှာ အဲ့ဒီ App တွေကိုဒေါင်းထည့်ချင်လို့သက်ဆိုင်ရာ App store ( Google Play Store, Apple Store ) တွေထဲကိုဝင်ပြီး အဲ့ဒီနာမည်တွေနဲ့ရိုက်ရှာလိုက်ရင် နာမည်တူ၊ ပုံစံတူ၊ App တွေအများကြီးထွက်လာတာမျိုးတွေ တွေ့ဖူးကြမှာပါ။ အဲ့ဒါတွေက ဂျင်းတွေများပါတယ်။ အဲ့ဒီ ဂျင်း App တွေထဲက တကယ့် Official app ကိုသာ သေခြာလေးစစ်ဆေးရွေးချယ်ပြီး Download ပြုလုပ်အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။
အကောင်းဆုံးကတော့ သူများသုံးနေတာမြင်ပြီးသဘောကျလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ်တိုင်က အသစ်အဆန်းဆိုရင်သဘောကျလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဟို App ဆိုလည်းဒေါင်းထည့်ပြီးသုံးလိုက်၊ ဒီ App ဆိုလည်းဒေါင်းထည့်ပြီးသုံးလိုက်လုပ်တာမျိုးတွေရှောင်သင့်ပါတယ်။ App တွေကို ဖုန်းထဲမှာစွတ်ထည့်ထားရင် ကိုယ့်ဖုန်းကို လေးလံစေသလို၊ ဘတ္ထရီအကုန်မြန်တာတို့၊ လိုင်းဖွင့်လိုက်တာနဲ့နောက်ကွယ်ကအသားကုန် Run ပြီး ထည့်ထားတဲ့ဖုန်းဘေလ်တွေကို ခနလေးနဲ့ကုန်အောင်လုပ်သွားတာတို ့သေခြာပေါက်ကြုံတွေ့ရမှာပါ။
အပေါ်မှာပြောထားသလို User data တွေကတော့ App ကို စပြီး install လုပ်ပြီးသွင်းလိုက်ကတည်းကသူတို ့ကဝင်ယူထားပြီးသွားပါပြီ။ ဒါကြောင့် တွေ့ကရာ App တွေကို လျှောက်ထည့်ပြီးသုံးတာမျိုးတွေရှောင်ကျဉ်ပါ၊ မလိုအပ်ပဲနဲ့App တွေကိုထည့်သွင်းထားတာမျိုးတွေမလုပ်ပါနဲ့လို့ပဲနောက်ဆုံးအနေနဲ ့ပြောချင်ပါတယ်။
Aung Kyaw Soe ( 4.2.2019 - 3:28 PM )
Video Credit: YTV
Knowledge Mobile Security Sharing Technology Video